Iibhotile eziphathekayo kunye nokokuzigqoka?
Imfashini yabasetyhini I zihlangu
Imozulu ayiyona nto imnandi kakhulu ngaphandle kwewindow. Kodwa yintoni enokuyenza ... I-autumn - yinkqubo enzima. Ivakalelwa ngathi ikhephu liza kuwela kwaye siyakutywelwa kumhlophe kumhlophe. Kodwa oku akuthethi ukuba asiyi kuba mnandi kwaye sihle nakwiindawo ezibandayo. Ngaba oku kuya kusimisa? Ezintle kwaye ziwayo zihlala zijackboots. Ezi zibhothi zinokugqithwa ngeengubo, iingubo, iimfudu ezinde. Ziyakufanelekela i-gala ebusuku, amaqela. Akuyiyo yonke intombazana enquma ukugqoka izibhoto. Abaninzi bayesaba ukuthatha uxanduva. Emva kwakho konke, lowo ubeka ezi zibhokisi kufuneka afane nomfanekiso ontle. Ngoko ke, kuyafaneleka ukuqonda ukuba yiyiphi eyokukhethayo iibhothi ezinokuzihlanganisa ngokubhetele.
Kubalulekile ukwazi okokugqoka ngeebhuthi
Njenganoma iziphi izicathulo, amabhuthi anokukwenza ube mnandi kwaye uhle, unomdla okanye ufikeleleke. Konke kuxhomekeke kwinto oya kudibanisa nale sihlangu. Iibhotile ezintle ziya kukhawuleza zitsalane abantu abadlulayo. Namhlanje, amaninzi amantombazana abhinqa ubomi bemihla ngemihla. Kwaye kubaluleke kakhulu ukuzikhethela.
I-jackboots efanelekileyo iyakunceda umfazi udale umfanekiso omhle. Imilenze yakho iya kubonakala iyinde kwaye ilula. Kwaye konke ukubonga kwiebhotile ngaphaya kwamadolo. Uya kunika umfanekiso wakho omtsha wobuhle kunye nowesifazane. Kodwa ezi bhotile ezimbi ziyakwenza ube yinto engcolileyo kunye neenxeba.
Esi sihlangu asifanelanga wonke umntu. Kufuneka kuqondwe ukuba akunakwenzeka ukuba zigqoke kuzo zonke iimeko kwaye zingekho ngaphantsi kweengubo. Esi sihloko esikhethekileyo se-wardrobe, esilindele ukufundwa ngokucophelela ngu-hostess. Kwaye ke, ukungaphumeleli kwimeko enzima, ibhinqa kufuneka liyazi ukuba yintoni iingubo zokugqoka.
Unokuzikhethela njani iibhothi?
Iindidi ezininzi zeebhuthi zikhulu. Zibanzi kwaye zincinci, kunye okanye zingenamfanekiso, zinemibala emnyama okanye imnyama nje, kwi-flat plane okanye napilke. Unokufumaneka kunye nokukhwela okanye i-zippers, njl. Yinto yenkcazelo kunye nebhajethi. Kodwa ungathini ukulahleka phakathi kweebhuthi uze ukhethe ezigqibeleleyo zemilenze yakho? Konke kulula.
Kukho umgaqo obalaseleyo kunye olula: umboniso obalaseleyo, umncinci we-bootlegs kufuneka ube. Emva koko isibalo siza kubonakala sinyene kwaye sinobuhle. Ukutyikitya ngokwabo kuyisifundo esihle. Ngoko ungawafaki kwi-sprint ekhawulezileyo yokugqoka. Emva koko, wonk 'ubani uya kuphulaphula izicathulo zakho, kwaye ke kukho ingubo. Kuya kuba nzima kakhulu, kwaye ukuba isambatho sakho silula, ngoko iindawo zakho eziphakamileyo akufanele zibacekise kwaye ziqheleke, zivumeleke zihlotswe nge-sash okanye ama-straps amahle.
Ngokubhekiselele kwimimiselo, kuyafaneleka ukunilumkisa. Ekubeni iibhothi zithe zanele ngokwabo, imihlobiso iya kutsala ngakumbi, kwaye loo ntokazi inokubonakala ibingamashumi amane ukusuka ku-bazaar. Ngoko kuyafaneleka ukugqoka into ethobekileyo. Ukuba ibhinqa lihamba kwiingxube, makhe makabeke iingubo ezizithobayo: amathanga amancinci kunye namasongo ecocekileyo, kodwa ngokuqinisekileyo ayikho imilenze okanye iintamo.
Yintoni enxiba ngayo iibhotile zefashoni?
Masizifumene oko sizambatha ngeebhotile. Okokuqala, kukufanele ukukhumbule: akufanelekile ukuba ugqoke unxibe iingubo ezinqabileyo, kunokubonakala ngathi uyintombazana elula kunye nexhoba elifikeleleka kakhulu kulabo abathanda ukuzonwabisa. Enyanisweni, ukuba le njongo yakho yokufika ngeveki, ilungelo lakho.
Akukhuthazwa ukuba unxibe i-pantyhose yombala okanye i-stockings phantsi kweebhuthi. Umbala womzimba wenza imilenze yakho ibonakale yimbi ngaphezu kweyona nto ibaluleke kakhulu. Ngoko ke, kukufanelekile ukuhlala kwi-pantyhose eqinile kwimiyalezo yeebhuthi okanye ukugqoka imibala ebonakalayo embala. Baya kubopha imilenze yakho emihle, i-tembolee ezinje iibhothi ziza kubenza zibe mncinane kwaye zide.
Musa ukugqoka iingubo ezimfutshane ze-decollete ngexesha elifanayo neebhotile. Ibukeka, yithi, ayiyinto enhle kakhulu. Uya kubonakala ngathi "ngobusuku". Nangona kwamanye amaqela oku kuya kuba kufanelekile. Kunokuba ingubo yakho iya kuba sele ikhona, ngoko i-bootlegs kufuneka ibe sele ikhona, ngaphandle koko imilenze iya kubonakala ngaphezu koko ikhona, kwaye oku akunako ukunyamezela.
Iingxowa azigqoki nje kuphela ngeengubo kunye neengubo, kodwa kunye neziqu zeepencil, i-leggings, kunye ne-jeans esincinci. Kwaye sikhohlwe malunga nezifutshane, kuba iifutshane yinto abayithandayo ukugqoka abantu abatsha ngeebhuthi eziphezulu. Kodwa iifutshane kufuneka zenziwe ngendwangu eninzi, kwaye ingabi mfutshane kakhulu. Ukuba zikhona kwizicelo kunye neengqungquthela, kwaye zifutshane, ngoko intombazana ayiyi kubheka indlela efanelekileyo kakhulu. Kodwa kwakhona, olu hlobo lomcimbi luya kwamkeleka, kodwa awukwazi ukuhamba ngezitrato emini. Amagama ambalwa kufuneka anikwe kwiingubo zangaphandle. Unokugqoka iibhothi ngengubo, ingubo kunye neengubo. Kodwa iingubo zazibukeka zingenangqondo.
Ngoko, ukugqoka iibhothi ezinjalo? Ekusebenzeni akukacetyiswa ukuba unxibe izicathulo, ungaziqondi kakuhle. Kufuneka, ukugqithisa amabhuthi, ubonise ihlabathi lonke ukuba awuyikwesaba nantoni na ukuba unokuba lunqweneleka kwaye unomdla. Ngoko ke, ezi zihlangu zikhuselekile kwiindawo, ukuhamba, iintlanganiso kunye neholide. Iintlanzi zinika ithuba lokuba uzive ucocekile, unqweneleka kwaye uzikhangele. Ungowona mhle kakhulu kwaye uyintle, yazi oku!
Izithende zakho kunye nawe: konke okufuneka ukwazi abafazi befashoni
Senza isigqoko sesigqoko ngomgaqo wokuthenga nge-smart
Imigaqo yokukhethwa kwezicathulo zabafazi
Ihlobo le-2014 - kungekhona ixesha lokulahla iibhothi
Ngaphantsi kweyiphi impahla efanelekileyo iibhola zebhola
Izicathulo zamabhinqa eziphathekayo, i-Spring 2016 - iifoto zeemodeli ezintle
Iingcebiso zokunyamekelwa kweenwele emva kokuhlamba
Indlela yokugcina amazinyo xa ukhulelwa
Izilwanyana zamanqanaba ngentlungu yentliziyo
Orchid Vanda: Unonophelo kunye noKhula
Ukungqinelana kwee-Pilates kunye ne-Callanetics
Uzi ngexesha lokukhulelwa: izibonakalisi kunye nexesha
Impazamo yamantombazana xa idibana nabafana
UAlexei Vorobyov utshitshisiwe ngesityhilelo esingalindelekanga malunga nokunyaniseka, umfanekiso
Kutheni sifuna iimvakalelo zethu neemvakalelo zethu?
I-carrot casserole: njani ukulungiselela ukuphathwa okunempilo kunye okunomsoco